W.Waxbarashada Somaliland oo Xayiraaddii Ka Qaadday 7 Dugsi Sare oo Ruqsaddii Shaqo Lagala Noqday – Goobjoog News
W.Waxbarashada Somaliland oo Xayiraaddii Ka Qaadday 7 Dugsi Sare oo Ruqsaddii Shaqo Lagala Noqday
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Somaliland ayaa ka noqotay go’aan ka dhan ah 7 dugsi oo gaar loo leeyahay oo Wasaaradda ay todobaadkan kala noqotay ruqsadii ay ku shaqaynayeen.
Kulan ay maalintii shalay magaalada Hargeysa ku yeesheen maamulayaasha dugsiyada gaarka ah iyo masuuliyiinta Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ayay dugsiyadaasi balan qaadeen in ay u hoggaansamayaan dhammaan awaamiirta ka soo baxda Wasaaradda Waxbarashada.
Dhinaca kale, Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Somaliland Cabdillaahi Ibraahim Habbane ayaa sheegey in khilaadkaasi soo kala dhexgalay Todobada dugsi iyo Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Somaliland laga heshiiyay.
“Todobadii Iskuul arrinkii aan ku haysannay ee wasaaradda waxbarashadu ku haysatay waa laga heshiiyay mar haddii wixii aan ku haysannay laga heshiiyayna anagun xayiraaddii waan la noqonnay, howsha kormeerka iyo Nidaamkuna waa mid socondoona haddii Alle yidhaahdo” ayuu yiri wasiir Cabdullaahi.
Ugu dabmeyn, Wasaaradda Waxbarashada Somaliland ayaa 20 August, 2017, ruqsaddii shaqo kala noqotay 7 dugsi sare ee kala ah dugsiga sare ee Tommorow, dugsigii Shamsu-diin la oran jiray ee haddana la baxay Seventeen, Ileys 1, Ammaano, Aklas, Caalami, Future, Todobadaa dugsi sare oo lagu eedeeyay iney u hoggaansami waayeen awaamiirta wasaaradda.
Koror Ku Yimid Xaaladda Umul Raaca Ee Soomaaliya
Gen. Galaal Oo Goobjoog U Sharaxaya Qodobo Ay Ku Heshiiyeen Galmudug iyo Ahlu-sunna
Kheyre Oo Arrimo Badan Kala Hadlay Safiirada Caalamka u Jooga Dalka